NgoNovemba 2019 - Iphepha le-14 le-14 - Funda ukuRhweba
Ithemba loRhwebo lonyusa ukuThintela umngcipheko njengeSola eDola inika igolide iPush
Ukuhlaziywa: 4 Novemba 2019
Ekuvukeni kokuntywila nge-0.2% ngaphambi kweseshoni, igolide ebonakalayo yayizinzile kwi-1,512.93 yeedola ngeyunce
Ukunyuka nge-0.2% kwi-1,514.80 yeedola nge-ounce yexesha elizayo yayiyigolide yase-US
Ixabiso legolide lalizinzile kwangoko ngoMvulo njengoko ugcino oluhlaza lwaye lwancipha kuphononongo olwenziweyo lokukhanya, ngelixa izibhengezo zothethathethwano lwezoqoqosho lwase-US- China lokudlula ngeli xesha lihlawulisa umngcipheko, ukuhlawula inzuzo kwi-bullion ekhuselekileyo.
I-Spot yegolide ibingaguquguquki kwi-1,512.93 yeedola ngeyunce, ukuqala ngo-0254 GMT, emva kokufaka i-0.2% ngaphambi kweseshoni, njengoko ikamva legolide lase-US lanyuka nge-0.2% nge-1,514.80 ngeyunce.
NgoLwesihlanu ophelileyo, i-China kunye ne-US bathi bavumile ngokubhekisele kwiingxoxo ezicwangcisiweyo zokuconjululwa kweembambano zorhwebo ezisusela phantse kwinyanga ezili-16 ezithe zonakalisa uqoqosho lwehlabathi, ngelixa abasemagunyeni base-US besithi kungafikelelwa kule nyanga ikhoyo.
Ukuthembela okungakumbi kubonwe kwintengiso ngedatha yezoqoqosho ekhutshwe kwiveki ephelileyo ethe yathomalalisa ukuthandabuza malunga nokudodobala okuxhotyiswe lixesha elide okutsalile imbambano yorhwebo phakathi kwamazwe amabini anoqoqosho olukhulu.
Kulwandiso lwamva nje, ukukhula kwemisebenzi e-US kuncitshisiwe njengoko bekungalindelwanga ncam ngo-Okthobha, ngelixa ukuqesha kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo kuphuculwe kunoko kuvavanyo lwamva nje, ulwazi oluvela kwiSebe lezaBasebenzi lubonisa.
I-Dollar ebuthathaka ixhasa ukuPhakama kweGolide
Okwethutyana, uluvo kwintengiso lubonakala luluncedo kakhulu kubaqikeleli ukuba bajonge igolide, utshilo uMargaret Yang Yan, ingcali kwezentengiso kwii-CMC Markets, kubandakanya nokuba idola ethe-ethe ethe xaxa ithintela ilahleko ngegolide.
I-greenback izamile ukubuyela umva ngolwesiHlanu emva kokuba iiroloji zaseMelika zigqithile kwiziphumo, nokuba kuyintoni na, bezingasebenzi ngenxa yesaveyi yemveliso ephantsi eyenze yabonakala ngathi ibalulekile.
Ngokuchasene neqela le-fiats, i-greenback yayixhonywe kwi-97.218 ibetha iinyanga ezintathu ezantsi kwi-97.107 ngolwesiHlanu. Okwangoku yayijolise kumkhombe ka-Agasti ka-97.033.
Ngayiphi na imeko, kwixesha eliphakathi ukuya kwixesha elide, kukho ukuphakama kwegolide ngelixa i-US Fed kufuneka inciphise amaxabiso kunyaka omnye ukusukela ngoku ukomeleza uqoqosho kunye nokuphakamisa ukuzithemba kwintengiso, ngaphambi konyulo e-US, u-Yan ubandakanyiwe .
Kwiveki ephelileyo, iFed yanciphisa amaxabiso okwesithathu kulo nyaka, nangona kunjalo, kwavakala ukuba kungasayi kubakho kuncipha ngaphandle kokuba uqoqosho luba mandundu.
Izabelo eAsia zonyuke zaya kwiiveki ezili-14 eziphakamileyo ngoMvulo, njengoko ithemba liqinisekileyo kwiingxoxo zorhwebo zase-US-China kunye nedatha yomsebenzi e-US exhasa iminqweno yabaxeli behlabathi malunga nezinto ezinobungozi.
Indawo yegolide inokuvavanya isithintelo kwi-1,519 yeedola ngeyunce, ikhefu elidlulileyo kweli nqanaba linokuqhubela phambili ukuya kwi-1,534 yeedola.
Ngeli xesha, eYurophu, eyiNtloko yeBhanki eNkulu yaseYurophu (i-ECB), uChristine Lagarde uza kunika intetho yakhe yokuqala emsebenzini njengoko iimarike ziqikelela ukuba uzakuhambelana nomgaqo-nkqubo olula oshiywe ngulowo wayechasene naye, u-Mario Draghi.
Phakathi kwesinyithi esahlukileyo, isilivere inyuke nge-0.2% ukuya kwi-18.12 yeedola ngeyunce, iplatinam yafaka i-0.7% kwi-952.59 yeedola ngeyunce, njengoko i-palladium inyuke nge-0.3% ukuya kwi-1,811.23 yeedola.
tags IDOLI, igolide, Intengiso yase-US-China yoRhwebo
I-Euro, iRandi yoMzantsi Afrika iBhola phambi kweNtloko ye-ECB, iNtetho kaChristian Lagarde
Iveki iqale ngenqaku elizolileyo leemali ezinkulu emva komnyhadala waseTokyo ngelixa abatyali-mali belindele ngolangazelelo intetho yokuqala esemthethweni evela kuChristian Lagarde, intloko entsha ye-ECB.
Ngababini bemali, idola igcine amaxabiso abalulekileyo angama-97.218, emva kokuba yehlile yaya kwi-97.107 ngolwesiHlanu ephantsi erekhodiweyo phakathi kuka-Agasti ukuza kuthi ga ngoku. Inethemba lokufikelela kwinqanaba eliphantsi lama-97.033 elirekhodwe ngo-Agasti. Idola ibizamile ukubuyisa umva ngolwesiHlanu emva kweendaba zokurhola ngokumangalisayo e-US kodwa ukunyuka kwayo kwathotywa luvavanyo olwenziweyo lokuyilahla. I-greenback iqhuba ngcono kancinci kune-Chinese yen kwiveki ephelileyo. Idola yaseMelika ibisilwela ukugcina indawo eyomeleleyo emva kokuba oovimba ababambeleyo behlise inzala ngoLwesithathu odlulileyo.
I-Euro yayiqale iveki ngokuqinileyo kwi- $ 1.1168 ngelixa iphantse yasondela kubude be-Okthobha ye- $ 1.1179 kunye ne-200-yeentsuku ezihamba nge- $ 1.1195.
I-Sterling ikwagcine ixabiso elibalulekileyo le-1.2935 yeedola emva kokuba ibuyile yabuyela kwi- $ 1.2200 kwinyanga ephelileyo njengoko abatyali mali bahlala bengoyiki malunga nokubethwa nzima kweBrexit ebusweni bonyulo oluzayo.
Irandi kubikwa ukuba inyuke ngaphezulu kwepesenti nge-14.8650 ngedola, ibuyela umva emva kokuhla kabukhali kwiveki ephelileyo. Ukunyuka kungalandelwa kwinyani yokuba abatyali zimali baphefumle emva kwesigqibo sikaMoody esimalunga namatyala elizwe.
Imali ekhuselekileyo, iYen, yabona ukwehla njengoko kubanjiwe ngolwesiHlanu nge-107.87 ngelixa ubuyela umva kancinci ukuya kwi-108.23.
Iziphumo zenzala yokutshixwa kwenzalo kwiimali ezinkulu
Ukuhlalutya iimpembelelo zokunciphisa inzala okwenziwa ziibhanki eziphambili, umhlalutyi ukubeka ukuba ukuncipha okusondeleyo kokungazinzi phakathi kweemali ezinkulu kwaye eli nyathelo libonakala livumelana ngokwenza umgaqo-nkqubo ofanayo. Ke ngoko iimali ezinamaxabiso aphezulu emali njenge-AUD, i-USD, i-NZD, kunye ne-CAD ziya kuba buthathaka. Oku, ke, kunokubangela ilahleko ezirekhodwe kwi-USD nakwi-CAD kwiveki ephelileyo.
Iimali zaseNorway nezaseSweden zibeke phambili itshathi yomzuzi ngokusekwe kwinqanaba lenzala elizinzileyo kunye nokunyuka okuqikelelweyo kwiinyanga ezizayo.
Ngaphambi kwale veki, iibhanki eziphambili e-Australia nase-UK zibambe iintlanganiso zokuthatha isigqibo malunga nokuhlaziywa komgaqo-nkqubo ngelixa intetho elindelwe kakhulu yentloko ye-ECB, uChristian Lagarde iyeza nabahlalutyi beqikelela ukuba kungangabikho lutshintsho lubalulekileyo kumgaqo-nkqubo. Izithethi ezisixhenxe ezondliwayo zibeka inqanaba lentetho yazo kule veki. Abatyalomali bakwimeko entle yokujonga izinto zase China -iintetho zorhwebo zase-US.
tags UmKristu uLagarde, ECB, Euro, MANDLA
I-Euro ePhakamileyo ngokuchasene neDola ebuthathaka njengoko i-Pair ifumana abathengi kwakhona kwinqanaba le-1.1128
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Novemba 4
I-euro yabhalisa ngaphezulu xa idola yaseMelika yawa. Isibini seFX, nangona singazinzanga kancinci, sakhankanywa kufutshane neendawo eziphakamileyo ezisandula ukulungiswa. Idatha yezemali yommandla we-euro isaza kukhutshwa. Oku kushiye elona candelo likhulu lomphumo wokukhupha idatha yase-US. Iingxelo ezininzi ziye zagcina idola ngokulinganayo.
Amanqanaba okumelana: 1.1450, 1.1412, 1.1280
Amanqanaba enkxaso: 1.1026, 1.0923, 1.0879
I-EURUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Kwindlela yexesha elide, okwangoku, ukubuyela umva kwinqanaba le-1.0879 kujongwa njengokulungisa inyathelo lokuqala. Ke, icala elingaphezulu kufuneka linyanzelwe kukubuyiselwa kwinqanaba kwakhona kwi-1.1450 ukuya kwi-1.0879 kwi-1.1280.
Ukudityaniswa okuphantsi ukusuka kwipateni esezantsi ukusuka kwinqanaba eli-1.1450 (phezulu) liya kuqhubeka kwinqanaba elizayo. Nangona kunjalo, ikhefu elixhaswayo lenqanaba kwi-1.1280 inokunciphisa le patheni ye-bearish kwaye iseke ukuqhubela phambili kokubuyela kwinqanaba ukuya kwi-1.1450 elandelayo.
I-intraday bias kwi-EURUSD ihlala ingathathi hlangothi okwangoku kunye nokudityaniswa kwinqanaba le-1.1178 kunokwenzeka ukuba landise ngasentla. Ukuqhubela phambili kunokwenzeka nenqanaba kwi-1.1026 yenkxaso yokuhlala ihleli.
Nangona kunjalo, kwikhefu elingaphezulu kwinqanaba le-1.1178 linokuphinda lenze kwakhona ukubuyela kwinqanaba le-1.0879 ukuya kwi-1.1412 yokuchasana okuphambili. Ngapha koko, ikhefu lenqanaba kwi-1.1026 ezantsi linokuqinisekisa ukuba ukubuyela kwinqanaba le-1.0879 kugqibe umjikelo wokubuyisela. Emva koko i-intraday bias inokubuyela umva kwicala eliphantsi lokuzama kwakhona inqanaba kwi-1.0879.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC )- Inkxaso ye- $ 9000 igcina i-BTC ecaleni emva kokuBuyela kwakhona
Urhwebo lweBitcoin luqhubekile nomzabalazo phakathi kweendawo ezixineneyo ze- $ 9000- $ 9400 kwezinye iintsuku ngoku. Ukuhamba kwecala kungenxa yokwehla kwefleshi ukusuka kwi-10350 yeedola ngasekupheleni kuka-Okthobha kwaye ngakumbi umqondiso wokubanjwa kwintengiso. I-Bitcoin inokuhlala kuluhlu oludibeneyo ukuba la maxabiso angentla ayabamba. Nangona kunjalo, urhwebo lwe-crypto lubonisa ukunyuka okunokubakho kwimakethi ye-BTC.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9800, $ 10000, $ 10350
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 9000, $ 8820, $ 8500
I-25 ka-Okthobha i-spike ivuselele uvakalelo lweBitcoin kodwa ukuzola kutshanje kuye kwenza ukuba intengiso ingazinzisi kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Ewe, izizathu zezenzo zexabiso langoku zinokubangelwa kukungabikho komdla phakathi kwabarhwebi. Sinokubona isicupho esikhuthazayo ukuba iBitcoin iphinda ibuyele kwimimandla engama- $ 8000. Okwangoku, inkxaso esondeleyo ilele kwi- $ 9000, $ 8820 kunye ne- $ 8500.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Novemba 4
Ukufumana ixabiso elingaphezulu kwe- $ 9400 kungavuselela ukuhamba kwiveki ephelileyo njenge- $ 9800, $ 10000 kunye ne- $ 10350 iya kuba yeyona nto kujoliswe kuyo kwi-BTC. Njengoko sibona, i-MACD okwangoku ilungile kunye ne-RSI yabo, efumana inkxaso kumanqanaba angama-50. Oku kuphakamisa ukuba i-Bitcoin isagcina amandla okonyusa kwitshathi yemihla ngemihla.
Ukusekwa koonxantathu kusenza i-Bitcoin iqiniseke kwitshathi yeyure. Izolo, ixabiso lichukumise umda osezantsi kanxantathu kwaye ngoku kufuneka silindele ukubuyela kumda ongasentla, apho uxhathiso lwe- $ 9350 lulele. Ngaphezulu konxantathu, ukunyuka okukhawulezileyo kufanele kusizise kwi- $ 9570 kunye ne- $ 9800.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Novemba 4
Ngaphantsi konxantathu, iBitcoin inokufumana inkxaso kwi-9000 yeedola- $ 8900, ebiyindawo ephambili ebuyayo kwiintsuku ezithile. Okungakumbi, siyabona ukuba i-RSI iyenyuka emva kokubona ukuwa kabukhali izolo. I-Bitcoin inokuthi ifumane amandla ngokukhawuleza xa i-MACD ishiya indawo yayo engalunganga.
Thenga ukungena: $ 9180
I-TP: $ 9350
Ukukhutshwa kwamva nje ngoMeyi koPhuculo lokuBuyisa emva kweNqanaba kwi-1.30 Ukuphathwa: Yintoni elandelayo kwi-GBPUSD?
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-nge-3 kaNovemba
Ngenxa yokukhutshwa kweendaba zamva nje, isibini se-GBPUSD sinokuphinda sibuyele ngaphaya komgca othe tyaba kwinqanaba lokuphatha i-1.30. Esi sibini siphume kwiveki ephelileyo ephezulu kwinqanaba le-1.2940. Ukuhamba malunga nee-pips ezingama-28 ngaphezulu emva kokuvulwa, i-Cable khange ikwazi ukubamba izibonelelo zayo njengoko abathengisi bathatha ulawulo lokuphelisa usuku olungaphantsi kwexabiso lokuvula. Njengoko iseshoni entsha iqala, inqanaba le-1.3000 libalulekile kwaye linokunciphisa umda phambili.
Amanqanaba okumelana: 1.3301, 1.3185, 1.3012
Amanqanaba enkxaso: 1.2582, 1.2195, 1.1958
I-GBPUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Kumfanekiso omde, imeko yangoku iqinisekisa imeko yebhotile yexesha eliphakathi kwinqanaba le-1.1958. Nangona kunjalo, kweli nqanaba, ukunyuka kwinqanaba le-1.1958 kubonwa njengokuhlanganisa ukusuka ekuweni kwangaphambili.
Kwaye inkqubela phambili engaphezulu inokubonwa umva ukuya kukuxhathisa kwe-1.3301. Ukuza kuthi ga ngoku, le meko inokuhlala njengeyona nto inokwenzeka kwinqanaba le-1.2582 ukumelana nokujika kwenkxaso ayihambelani. Nangona i-GBPUSD ibonakalisa ukwehla kwexesha elifutshane, kunokwenzeka ukuba ibe lolungiso, njengoko iindlela eziphakathi kunye nezexesha elide zisaqhubeka.
Kwisakhelo seyure ezi-4, umkhethe uhlala ungathathi hlangothi ngaphambi kokuvulwa okulandelayo njengoko i-GBPUSD ihlala ngokudityaniswa ukusuka kwinqanaba elikwi-1.3012 ukusuka kwiseshoni yokugqibela ngelixa umbono ungatshintshanga.
Okwangoku, kwimeko yokuphinda kubuyiselwe kwelinye icala, icala elingaphantsi linokuqulathwa ngaphezulu kwenqanaba le-1.2582 ukumelana kujike inkxaso ukuze kusebenze okunye ukuqhubela phambili emantla. Kwicala elingaphezulu, ikhefu lenqanaba kwi-1.3012 linokuqhubela phambili ukuqhubela phambili kwinqanaba le-1.2195.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Izalathi zezoBuchule ziphakamisa ukuHamba ngeBitcoin, Ngaba ama- $ 9000 abambe?
Ukuhlaziywa: 3 Novemba 2019
I-Bitcoin ibikufumanisa kunzima ukophula i-9400 yeedola kwiintsuku ezidlulileyo njengoko i-9000 yeedola iqhubeka isebenza njengenkxaso eqinileyo nayo. Le mimandla yexabiso ekhankanywe ngasentla ibalulekile ekuhambeni kweBitcoin kwiintsuku ezizayo. Okwangoku, sinokulindela ukuba le mimandla iqhekeke kwakamsinya nje xa ukwanda kokungazinzi kwenzeka. Njengangoku, i-Bitcoin ithengisa nge-9180 yeedola emva kokubona amaxabiso amancinci ehla.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9600, $ 9800, $ 9950
Kwangoko namhlanje, i-Bitcoin iyaliwe kwi-9400 yeedola emva kokulawula ukubuyela kwi-8961 yeedola ngo-Okthobha 31. Ukuchasana okukhankanyiweyo kuye kwaba yindawo enzima kubarhwebi abade ukugqitha kwiintsuku ezidlulileyo njengoko iBitcoin ngoku ibuyela kwimimandla engama- $ 9100. Okwangoku, i-BTC ibonisa ubuthathaka obuncinci kwixabiso kwaye ngaloo nto, sinokulindela inkxaso kwangoko kwi- $ 9000, $ 8820 nakwi- $ 8500.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Novemba 3
Ngapha koko, izikhombisi zobuchwephesha zihamba kancinci ukubonisa ukuba ixabiso liyancipha. Ukunyuka ngaphezulu kwe- $ 9400 ukumelana luphawu olulungileyo lokufumana ixabiso njengemimandla elandelayo ekufuneka uyijongile yi- $ 9600, $ 9800 kunye ne- $ 9950 ephezulu. Okwangoku, ukungazinzi kweBitcoin kusezantsi ngalo mzuzu njengoko kukho imfuneko yokunyuka kwamaxabiso ukumisela eyona nto ilandelayo yentengiso.
I-Bitcoin ijikeleza enye i-rally njengoko imarike ihlala ngaphakathi kwipateni yonxantathu ehambelanayo. Okwangoku, ixabiso livavanya inkxaso kanxantathu kwi- $ 9100 emva kokwenza ubume obuphezulu obujikeleze i-9400 yeedola kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Okwangoku, iBitcoin ibingazithembi kwezi yure zintandathu zidlulileyo. Ukuba umda osezantsi kanxantathu unokuvelisa isaphulelo, kufuneka silindele ukuba ixabiso lixabise i- $ 9350, ukuhlangabezana nomda ongunxantathu ongasentla.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-Novemba 3
Ukwaphuka kuya kuzisa intengiso kwi- $ 9000 nangaphantsi. Ukuqhekeka kungathatha iinkunzi zeenkomo ngqo ukuya kwi-9600 yeedola nangaphezulu. Kodwa xa ujonga izikhombisi ze-RSI kunye neze-MACD, iBitcoin sele ilungile njengokuba ukudipha kunokubangela ukuba iBitcoin yehle kunxantathu. Okwangoku, iBitcoin ngoku ihamba ecaleni.
Isivumelwano esiseMthethweni esivunyiweyo yiMelika kunye neTshayina emva kweNtetho yeVeki yeNtengiso
Ukuhlaziywa: 1 Novemba 2019
NgoLwesihlanu iSebe lezoRhwebo lase China livakalise ukuba usekela-Nkulumbuso u-Liu Wayenomnxeba kunye nabathethathethwano kwezorhwebo e-United States, u-Robert Lighthizer kunye no-Nobhala Wezemali u-Steven Mnuchin. Amacala ahlukeneyo ngokudibeneyo ayeneengxoxo zokwenyani kunye nezifumanekayo kwimibuzo esisiseko yorhwebo kwaye baxoxa ngezicwangciso zomjikelo ohamba kunye nesivumelwano.
Ukubhengeza iingxelo zorhwebo lwangoku lweveki, i-China ivakalise ukuba izingxoxo ezizizo neziluncedo kwimicimbi yezorhwebo ezisisiseko ziye zavumelana kwezi ntetho zilandelayo.
Ngelixa bekuxelwa ngolwe-Sihlanu, i-China ivakalise ukuba ifike kwisivumelwano ne-United States kwinqanaba elisisiseko emva komnxeba phakathi kwabathethathethwano abaphezulu bezorhwebo kule veki.
UVP Liu He wePeoples Republic of China ngolwe-Sihlanu uthethe ngomnxeba noRobert Lighthizer noSteven Mnuchin, wabhengeza iSebe lezoRhwebo laseTshayina.
I-White House yathi kwisibhengezo sangoLwesihlanu sokuba iqela lezokuthengisa lifumene indawo kwiindawo ezahlukeneyo kwaye lisombulula imicimbi engaqhelekanga, kwaye iingxoxo ziya kuqhubeka kwinqanaba likasekela mphathiswa.
I-White House ngokunjalo ibhengeze ukuba iqela lokuthetha-thethana kwezorhwebo lifumene umhlaba kwimimandla eyahlukeneyo kwaye bayayichaza imiba ekhethekileyo.
Isigaba sokuQala soRhwebo
Izitrato ezimbalwa zaseWall zibonise uloyiko ngokubhekisele kwisivumelwano sokuqala, sibhengeza ukuba oko kuthetha nje indawo encinci yentengiselwano njengoko ibonwa nguTrump ekuqaleni.
Isivumelwano sokurhweba sesiGaba sokuqala sithetha malunga neepesenti ezingama-60 zesivumelwano sexesha esichazwe ngakumbi esivelise uMongameli uTrump. Okwangoku, uphando olukhutshwe ngoLwesine lubonisa ukuba isimo sengqondo sokungazithembi sika-Mongameli uTrump senza i-China ibuze ngesigqibo sokurhweba ngokubanzi ne-United States.
Isigaba sokuqala sokurhweba esizama ukulungisa nokuphelisa ukukhawulezisa irhafu kunye nokufunyanwa kwe China kwezinto zezolimo e-US kwangenwa phakathi kwe-United States ne China emileyo njengezinga lokugqibela lesivumelwano.
Ukusukela ngoLwesine, uMongameli wase-United States uTrump ubhengeze ukuba esinye isiganeko sokutyikitya isivumelwano esinyanzelekileyo siza kwaziswa kungekudala emva komsindo woluntu ocela umngeni kuhambo lwezothutho olungalungelelananga kwintlanganiso.
tags Isigaba sokuQala soRhwebo, Intengiso yase-US-China yoRhwebo
Igunya lezeMali laseMalta liphakamisa iAlarm yoLwaphulo-mthetho olutsha
Ngokwengxelo efakwe nge-31 ka-Okthobha, iGunya lezeMali zeMalta (MFSA) lazise uluntu ngobuqhetseba beBitcoin. Obu buqhetseba butsha buneempawu ezifanayo nobunye ubuqhetseba obuye babonwa ngaphambili.
I-MFSA ilumkise uluntu ukuba luwuphephe umzimba obizwa ngokuba yi 'Bitcoin future' obonakala ubonakalisa izinto ezifanayo ezikhohlisayo njengenye eyaziwa ngokuba yi 'Bitcoin Revolution'. I-MFSA sele ikhuphe izilumkiso zoluntu ezi-2 kulo nyaka kwi-Bitcoin Revolution. Ingxelo ibonisa ukuba ezi projekthi zobuqhetseba zibonakala ngathi zihlala zivela kwi-intanethi njengeentengiso, emva kokutshintsha iilebheli zabo ukubakhusela ekubonakaleni.
Umlawuli olawulayo wathi iintengiso zithengisa izithembiso ezingezizo ezifana "nendlela yokwakha ubomi bakho ngcono" kunye "nethuba elikhethekileyo leMalta", kwaye yaqondisa uluntu kwiphepha lewebhu elichanekileyo apho kuthengiswa iintengiso ezingezizo.
Njengokuziphendulela, i-MFSA ithe iBitcoin future ayamkelwa njengequmrhu elisemthethweni eMalta, ayinayo imvume yokuhambisa iinkonzo zezemali nangayiphi na indlela kweli lizwe, kwaye ayihambelani nolungiselelo lwexeshana ngokubhekisele kwiNqaku 62 le-Virtual Umthetho wezeMali waseMalta.
Ukuyishwankathela, iqumrhu elilawulayo lithe iBitcoin yeXesha elizayo kubonakala ngathi kukunganyaniseki okukhoyo kwihlabathi jikelele kwaye icebise abemi bayo ukuba bayeke ukuzibandakanya nayo kwaye abo bayenzayo bazakwenza oko ngengozi yabo .
Ingxelo ikwaqulathe ikhonkco kuluhlu olugunyazisiweyo lwamaziko emali aqinisekiswe yi-MFSA, kunye neenkqubo zokuchonga ukuba ngaba umboneleli-nkonzo ngumkhonyovu okanye hayi.
Isicwangciso esitsha kunye noMdibaniso yi-MFSA
Ngo-Septemba, i-MFSA yasasaza isikimu sokujonga ngamandla nokulawula umngcipheko kwimibutho ye-cryptocurrency.
Isicwangciso-qhinga, esiza kuqala ukusukela kowama-2019 ukuya kowama-2021, sichaze ukuba iziko elilawulayo liceba ukuphucula indlela yokusebenza kwaye liza kusebenza ngokuthe ngqo neCandelo loHlahlelo loBuntlola bezeMali, kunye namanye amagunya ehlabathi.
Ngelinye ixesha kulo nyaka, i-MFSA yaqhagamshelana neCipherTrace, iqumrhu lokhuseleko le-blockchain, ukujonga imisebenzi enxulumene ne-cryptocurrency kweli lizwe kunye nokulwa ubuqhetseba kunye nenkxaso mali yobunqolobi.
tags I-Bitcoin Scam, Cryptocurrency, Igunya leeNkonzo zeMali zeMalta (MFSA)
Ukubuyela umva ukuwa kwi-EURJPY emva kokuGungqa ngezantsi kweNqanaba eliPhambili leNkxaso yeTekhnoloji kwi-120.35
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Novemba 1
Isibini semali ye-EURJPY siwile kwaye saphula indawo ebonakalayo ethe tyaba kwinqanaba le-120.35 ngexesha leseshoni yezolo. Ngokubhekisele kwikamva elikufuphi, abathengi kwi-EURJPY banokuthatha ireyithi yokutshintshiselana babuyele kwicala eliphakamileyo ukuze baphinde babeke inqanaba lamaxabiso kwi-121.10 / 121.47 ngaphakathi kwale seshoni okanye kwiseshoni elandelayo yokuthengisa.
Amanqanaba okumelana: 127.52, 125.23, 123.37
Amanqanaba enkxaso: 119.11, 117.08, 115.86
Kumfanekiso we-EURJPY wexesha elide, imeko yangoku yomeleza umbono wokuba isiseko esisezantsi esiphakathi senziwe ngokujikeleza indawo ethe tyaba esezantsi kwinkxaso kwinqanaba elikwi-117.08, kulwakhiwo lwesimo esiliqili kwimbonakalo yemihla ngemihla, ngaphezulu kwenqanaba le-115.86 Inkxaso ebalulekileyo.
Nangona kunjalo, ikhefu lokuthatha isigqibo kwinqanaba le-120.78 lenkxaso lijikile ekuchaseni linokuqinisa eli tyala kwaye lizise ukuqhubela phambili kwimeko yokuchasana kwembono ngoku kwinqanaba le-125.23. Isibini seFX sibonisa ubuthathaka okwangoku (ngokwexesha laso elide le-downtrend) kunye nepateni yexesha eliphakathi ngoku ingekhoyo.
I-flipside ye-EURJPY isele ekudityanisweni ukusuka kwinqanaba elikwi-121.47 kwaye kukukhetha okwa-intraday okwangoku kuhlala kungathathi cala. Okwangoku, kwimeko enokwenzeka yokuntywila ngokunzulu, icala layo elisezantsi linokuthintelwa ngaphezulu kwenqanaba lenkxaso ye-119.11 ukuzisa enye i-rally kwindawo ephezulu.
Ngokubhekisele kwikamva elikufuphi, abathengi kwi-EURJPY banokuthatha inqanaba lotshintshiselwano baphinde babuyele kwinqanaba lexabiso ngo-121.10 / 121.47 kwicala elingaphezulu, ikhefu kwinqanaba le-121.47 linokuphinda linike amandla amandla okuqhubela phambili ukusuka kwi-117.08 ukuya kwinqanaba le-123.37 ngokulandelayo.
Ixabiso lokungena: 120.78
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Ithemba le-Bull liyenyuka ngeNyanga eNtsha njengoko i-9000 yeedola ixhasa
Ngokuchasene neDola yaseMelika, ixabiso leBitcoin liyabetha kwaye liyasokola nge-9000 yeedola ukusuka ezantsi kunye ne-9400 yeedola ngaphezulu. Ukusukela i-BTC ichukumise i-10350 yeedola ngo-Okthobha u-26, ixabiso liye labona ukwehla okukhulu, nangona iBitcoin ngoku ivula i- $ 9100 kwinyanga entsha. Iintsuku ezizayo kufuneka zisinike umkhondo wokuba ixabiso liza ngaphi ngokulandelayo. Okwangoku, i-Bitcoin yehle nge -0.77%.
Amanqanaba okuphikiswa aphambili: $ 9400, $ 9950, $ 10350, $ 12000
I-Bitcoin ithengisa kancinci ngaphezulu kweenyanga ezi-5 ezisa ishaneli ngenkxaso kwi-9000 yeedola. Umqondiso wexeshana wokunyusa awukaqinisekisi ngaphezulu kwe-10350 yeedola. Okwangoku, kuya kufuneka sibone ukuguqulwa okupheleleyo okupheleleyo ukuba i-Bitcoin spikes ibaluleke kakhulu ngaphezulu kweminyaka emi-2 yokumelana nonxantathu kwi- $ 12000. Kodwa ngoku, ukwahlulwa kwejelo kubonakala kububuxoki ngalo mzuzu.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Novemba 1
Ukusuka ngasentla, kufuneka sibukele i-9400, i-9800 yeedola, i-10000 yeedola kunye ne-10350 yeedola. Ukusuka ngezantsi, ikhefu le- $ 9000 linokusikhokelela ekubeni sibuyele kwisangqa sangaphambili sokudibanisa kwi- $ 8800, $ 8400 kunye ne- $ 8000 inkxaso. Okwangoku, i-BTC inyusa i-RSI kunye nomnqamlezo omncinci kwi-MACD ukucebisa ukuba iinkunzi ziyabuya. Ngeli xesha, kufanelekile ukuba silindele ukuthengwa okunzima kwisigaba esilandelayo sokwenyusa.
Ukusukela nge-25 ka-Okthobha, ukungazinzi kweBitcoin kuyehla njengoko urhwebo ludala amaqondo aphezulu asezantsi e-10350, $ 99950 kunye ne- $ 9428. Le mimandla yamaxabiso ayichasanga ukugcina iso kwi-bull run ezayo, nangona i-BTC ilahlekelwa ngamandla okwangoku njengoko abathengisi bajolise inkxaso ephantsi kwi- $ 8900, $ 8820 kunye ne- $ 8600.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Novemba 1
Kodwa inkxaso ye-9000 yeedola ibonakalisa yomelele kwintengiso ukuba yaphule umthetho. Zombini i-MACD kunye ne-RSI ziyacothisa ukwehla kodwa zisabonisa uphawu lokunyusa ngaphezulu kwenqanaba labo eliphakathi. Nangona kunjalo, i-Bitcoin kufuneka iqhubeke nokunyuka kwe-bullish ukuba inkxaso ye-9000 yeedola ingaqhubeka nokukhusela kakuhle.
I-TP: $ 9400
SL: $ 8890
← Entsha izithuba 1 ... 13 14abaDala izithuba →